Sangana neAllied Health Intern yedu, Natalia! - Hinds Feet Farm
Ndinogona kuyeuka nguva yokutanga yandakashanyira Hinds' Feet Farm panguva yerabhoritari yekirasi uye pakarepo ndichinzwa runyararo nechokwadi chakaramba chiri kwandiri kubva zuva iroro. Iwe unogona kunzwa rudo uye mufaro paminiti yaunotsika tsoka paimba uye wega wega mushandi, mugari, uye nhengo yechirongwa chezuva vakaparadzira rudo irworwo nemoyo yavo yese. Makore matatu mushure mekushanya kwangu kwekutanga ndakakomborerwa kutaura kuti ndakave nerukudzo rwakakwana uye rombo rekuiswa pano kuitira kutenderera kwangu kwekiriniki yeOccupational Therapy.
Semudzidzi wepabasa remubatsiri wekurapa ndakakwanisa kushanda nevagari pakuchengetedza nekuwedzera rusununguko rwavo nezviitiko zvezuva nezuva (mabasa). Mukati memavhiki ekupedzisira e8 Brittany Turney neni takakwanisa kupupurira kubudirira kwakaitwa nevagari. Isu tinodzidzisa vagari nezve hunyanzvi hwekuchengetedza simba nekupfeka uye kushambidzika, kushanda pakudzidziswa kwesimba kuvandudza kumira kwakamira kwemabasa ekugadzirira kudya, uye kuunza chero midziyo yakagadziridzwa kuwedzera rusununguko rwekuzvidyisa kana manejimendi epamba. Nepo OT yanga ichinyanya kushanda nevagari isu tanga tichishanda nenhengo dzeZuva Chirongwa nguva nenguva mukati mezuva. Chinangwa chimwe chete chekuwedzera rusununguko rwemunhu nezviitiko zvezuva nezuva mukati memba yekugara zvakare chinoenderera mberi mukuwedzera rusununguko mukati menharaunda nekugadzirisa hunyanzvi hwemagariro, kudzora manzwiro / hunyanzvi hwekuita, uye kushanda pamitambo yakanaka yemotokari panguva yeFarm Chores.
Zuva rega rega randakapedza ndiri pano paHinds rave rakakomborerwa. Ndakatarisira zuva rega rega randinowana kuuya pano uye kushanda nevagari uye nhengo dzechirongwa chezuva uye ndinotya zuva randinofanira kuenda. Ndakaona rudo rwuri muchimiro charwo uye ndakashanda pamwe nevanhu vazhinji vakanyanya vanoziva nezveTBI uye vakandidzidzisa zvakawanda munguva pfupi pfupi.